Fampianarana Antserasera 7 Vaovao Hamenoanao Ny Fotoam-Pahavaratra · Global Voices teny Malagasy
Fampianarana Antserasera 7 Vaovao Hamenoanao Ny Fotoam-Pahavaratra
Voadika ny 14 Jolay 2014 8:09 GMT
Mifarana Fahavaratra Ny Taom-pampianarana: Tsy Tokony Mifarana Mandrakizay Kosa Ny Fianarana, avy amin'i Wesley Fryer (CC BY-SA 2.0)
Fenoy amin'ny alalan'ny fandratoana fahalalàna vaovao miaraka amin'ny fampianarana antserasera ny fandaharam-potoana mandritra ity fahavaratra ity:
Savalalana Mankany Amin'ny Asa Fanoratan-gazety – Fantaro ny momba ireo fitsipika lehibe sy adihevitra momba ny asa fanaovan-gazety ary ampiharo ao anatin'ny fivoaran'ny tantara ny asan'ny mpanoratra gazety .
Ahitana fanoratam-baovao, fanoratan-kevitra, fanoratana lahatsoratra, fanadihadiana amin'ny asa fanaovan-gazety sy fitaterana momba ny politika ireo lohahevitra. Atolotry ny Oniversiten'i Strathclyde, Glasgow amin'ny alalan'ny FutureLearn. Maimai-poana ny fampianarana ary manomboka amin'ny 29 Septambra.
Metadata: Mandamina sy Mahita Vaovao – Mamariparitra ny fomba fampiasana Tahiry Voamarika (metadata) ho fitaovam-pampitam-baovao hoan'ny Habaka, hoan'ireo angon-tahiry ary hoan'ny rindrambaiko sy fampiharana informatika manodidina antsika ity fampianarana ity .
Miompana amin'ny karazana tahiry voamarika (metadata), fitaovana ahafahan'ny vanim-potoanan'ny fampafantarana miasa notontosain'olombelona sy notontosain'ny solosaina, ary ireo fomba ampiasaina ny tahiry voamarika avy amin'ny fijery Siansan'ny vaovao (Fampafantarana), sehatra mandalina ny fomba ananganana sy itantanana ny fampafantarana ity MOOC Coursera maimai-poana ity. Manomboka amin'ny 14 Jolay.
Faharetan'ny Tantara Fanadihadiana : Kilasy Master - hanazava momba ny fanadihadiana amin'ny asa fanaovan-gazety manomboka amin'ny hevitra ka hatramin'ny famoaham-baovao ny mpanoratra vaovao ela nihetezana ao amin'ny the New York Times.
Hanolotra fandaharana atolotr'i David Barstow ny Oniversitem-baovao, izay hanazava ny fomba fanoratany tantara, tantara maro olona mpandray anjara na amin'ireo tantara heverina ho tsy mety ho tonga amin'ny fitantarana aza. Hiresaka momba ny fomba fanoratana tantara sy tantara maro mpandray anjara. Manomboka amin'ny 10ora sasany maraina amin'ny 1 Aogositra ny fampianarana. Efa misokatra ny fisoratana anarana ary 99 dolara amerikana ny sarany.
Asa Fanaovan-gazety nomerika – amin'ny teny Espaniola – momba ny fanatsarana ny fahaizana multimedia, famokarana feo, lahatsary, sy asa soratra ao amin'ny Habaka.
Atolotry ny Oniversiten'i Guadalajara ao Meksika, hanolotra fampianarana maharitra dimy herinandro amin'ny volana Septambra. Azo hianarana ao amin'ny aterineto manomboka ny 1 Septambra hatramin'ny 5 Oktobra ny fampianarana. Ny saran'ny fisoratana anarana dia MXN 1200 hoan'ireo mpandray anjara ao Meksika ary 120 dolara Amerikana kosa hoan'ireo mpandray anjara ivelan'ny firenena. Amin'ny 17 Aogositra ny fe-potoana fisoratana anarana farany .
Fampidirana momba ny Asa fanaovan-gazety amin'ny finday – zava-baovao farany indrindra eo amin'ny tontolon'ny fampahalalam-baovao amin'ny finday sy ny fahafahana manatontosa ny asa fanaovan-gazety amin'ny alalan'ny finday.
Atolotry ny Foibe Knight, hitondrana ny mpianatra ho haingana amin'ny zavatra rehetra mikasika ny fiantraikan'ny finday amin'ny asa fanaovan-gazety, anisan'izany ny fampiasana tsara indrindra amin'ny fitateram-baovao amin'ny finday, ny famoronana, fampivelarana ny vokatra, fikarohana mpihaino, vaovao malaza sy ny hoavin'ny finday sy ny teknolojian'ny finday. Hanomboka amin'ny 30 Jiona hatramin'ny 3 Aogositra ny fampianarana maimai-poana.
Linkedin hoan'ny mpanoratra gazety - Torolanana amin'ny fampiasana ity tambajotra sosialy ity ho loharanom-baovaom-panoratan-gazety.
Hanomboka amin'ny 21 Jolay amin'ny 12:30 atoandro ity fampianarana maimai-poana ity, tsy maintsy mpikambana ao amin'ny Linkedin (maimai-poana ny fisoratana anarana) ireo mpandray anjara.
Famoronana, Zava-baovao sy Fanovana – amin'ny teny Anglisy sy teny Shinoa ny fampianarana – hevitra hitondrana ny fahaizanao mamorona
Mampihatra fomba fianarana mifototra amin'ny traikefa ity fampianara ity mba hitondrana fanovana fahaiza-mamorona. Atolotry ny Coursera, ity MOOC maimaim-poana ity dia hanomboka amin'ny 14 Jolay hatramin'ny 1 Septambra.
Isaorana ny habaka ijnet izay nahafahana namoaka ny sasany tamin'ireo fampianarana ireo .